Aan qaali ahayn oo aad waxtar u leh! Dhibcaha dillaacsan ee bisadaha: xeerarka isticmaalka, iyo sidoo kale aragti gaaban ee ugu fiican
Markaad ogolaato xayawaanka xayawaanka ee noloshaada, waa inaad fahamtaa in mulkiilaha masuuliyaddu aysan ahayn kaliya buuxinta saxanka cuntada oo marmarna faaruqinaya saxanka. Mararka qaar xayawaanku wuxuu heli karaa dhiig yar oo nuugaya "saaxiibo" oo si farxad leh u qabsanaya maqaarka saaxiibkooda cusub, iyo weliba aqalka oo dhan.
Muuqaalka koowaad ee baaskiilka ayaa ah dhacdo caadi ah. Ma aha jidka kaliya iyo xayawaanka guri la'aanta ah, laakiin sidoo kale xayawaanka nadiifka ah waxay ku xiran yihiin weerarka dhiigga yar yar. Xaqiiqdu waxay tahay in boodbadu si sahlan ugu soo gali karaan qolka laga soo galo irid aan aad u nadiif ah, "ka soo" ka soo jiid dharka ama kabaha dadka deggan, "ka boodi" deriska.
Boodhadh Dhib maahan! Waxyaabaha blaayo ee bisadaha: sida looga baxo guriga
Dareemaha bisadaha waa mid aad u caadi ah, gaar ahaan haddii xayawaanku waqti badan ku qaadato waddada. Si kastaba ha noqotee, bacriminta gudaha ma laga ilaalin karo boodada 100%, tan iyo dirxiga dulinka ah waxaa lagu geyn karaa guriga kabaha ama dharka. Miisaanka caruurnimadu waa cayayaanka yaryar ee aan lahayn baalal, oo si fiican u dhaqdhaqaaqa dhogorta iyadoo ay ugu wacan tahay dhismaha jirkooda.
Rakfaahin sida hubka dhexdhexaadinta ah! Dhibcaha xooga u ah baqyada laga helo boodada iyo dulinada kale, qiimaha iyo tilmaamaha isticmaalka
Doorashada wakiilka antiparasitiga ee bisadaha, waxaanu hagaynaa macluumaadka ku saabsan soo saaraha, dib u eegista, talooyinka dhakhtarka. Iyo, dabcan, fiiro gaar ah u leh walxaha firfircoon iyo dhibaatooyinka kala duwan ee uu kakoobayo. Waa wejiga ugu dambeeya ee si qoto-dheer u kala soocaya Stronghold hababka kale ee ka yimaada dulinka gudaha iyo dibedda: Selamectin kaliya ma laha analogs.
Waxaa jira fikrad ah in bisad aan wadada ku jirin uu leeyahay boodh. Macaamiil badan oo xayawaanka dhogorta leh ayaa ku fekeraya meesha ay ka imaanayaan Bisadu waxay ka soo qaadi kartaa dulinka gurigeeda, waxaanan guriga keenaynaa guriga. Dhar ama kabo. Ugu xun ee dhan haddii ilmuhu ku dhaco boodada. Maxay tahay iyo sida loo ciribtiro cayayaanka iyada oo aan waxyeello u geysanayn ilmo yar?
Ha taabanin, wuu weli yar yahay! Waxa la sameeyo iyo sida loo saaro boodada kalluunka
Muuqaalka guriga ee qaniinyada yar wuxuu keenaa oo kaliya farxad u ah dhammaan xubnaha qoyska in ay la xiriiraan hammuun iyo caan ah, laakiin sidoo kale waxay ku qasban tahay inay mas'uul ka noqoto nolosha iyo caafimaadka booge aan difaac lahayn. Cadaadiska ugu khatarsan ee loogu talagalay jimicsiga ayaa ah boodada. Cayayaanka dhiqlaha ah waxay weerari karaan ilmo hore loogu talogalay bilaha ugu horreeya ee noloshooda (laga soo qaado hooyooyinka bisadaha, walaalaha iyo waliba xayawaanka kale).
Waxyaabaha ay ka mid tahay dulin-dhiig-ku-nuugidda duurjoogta, ugu waxtarka badan oo ammaan ah waa dhibco. Diyaargarowyadani waa sahlan tahay in la isticmaalo, waxaa lagu dabaqayaa aagga xayawaanka xayawaanka ah waxayna ka kooban yihiin sunta cayayaanka kuwaas oo tirtiraya dhibaatada la xidhiidha muuqaalka cayayaanka dhiigga ku dhaca. Dhibaatooyinka casriga casriga ah ee gebi ahaanba waa kuwo aan wax khasaare ah u lahayn caafimaadkooda xitaa carruurta yar yar.
Marka laga hadlayo boodada guriga, qulubo badan, si qalad ah u rumaysan in dulin-keenayaashu ay ku dhacaan xaalad aan caadi ahayn. Xaqiiqdii, xitaa degaannada aan fiicnayn caymisyada looma caymiyo martida aan la socon. Aan fiirino duldhigmooyinkan soo socda. Halkee bay ka soo jeeda qaylada guriga? Sida ku qoran boodhada guriyeynta waxay ka dhigan tahay 30 nooc oo cayayaanka dhiig-nuugaya illaa 5 mm oo cabbirka, gurmadka guriga.
Sababtoo ah, waxaa had iyo jeer loo maleynayaa in boodada halis ku ah xoolaha, sababtoo ah iyagu waa sayidooda. Ninka, dhibaatadu waxay ahayd injir. Dhab ahaan, wax walboo sidaas ma aha. Diidmadu maaha kuwo halis u ah bani-aadamka. Meeshu jirto xayawaan, waxaa jira boodada. Waxyaabo kale ayaa ah inta milkiilayaashooda ay ka warqabaan arrintaan waxayna si firfircoon ula dagaalayaan sharkan.
Baro sida looga baxsado cuncun! Xiniinyaha wuxuu ku qaniinaa qof, daaweynta calaamadaha
Qaniinyada caloosha ayaa qofka siinaya, sida xayawaanka rabaayada ah, badan oo raaxo leh. Dareenka maqaarka iyo cuncunka ayaa kaa ilaalinaya siyaabaha loola dagaalamo cayayaanka dhiqlaha. Diyaargarowga waa cudurada dilaaga ah sida cudurka daacuunka, brucellosis, encephalitis iyo kuwo kale. Sidaa daraadeed, qof waliba waa inuu ogaadaa sida loo dhaqmo haddii qaniinyada hore u dhaceen.
"Dhexdhexaad ah" Fool-jilbaha iyo sida looga saaro guriga
Boodada jiirka waa cayayaanka loo aqoonsan yahay inay yihiin kuwa ugu khatarta badan ee dhiigga ku jira ee dhiigga ku dhaca. Boodadaas badiyaa waxay badashaan waxtarkooda, waxay si fudud u qabsadaan xaalad kasta waxayna awoodaan inay ku noolaadaan cunto la'aan muddo dheer. Intii lagu guda jiray qarniyadii dhexe, waxay sababeen dhimashada dad badan. Muuqaal Waxaa jira 2 nooc oo ah boodada rat: Europe iyo koonfurta.
Sidee bay u yimaadeen? Xaggee ayuu jiido ka yimaadaa guriga: sababaha iyo calaamadaha caabuqa
Fikradda ah in duulimaadka kaliya ee lagu weeraro goobaha halkaas oo ay jiraan xayawaan guri oo khalad ah. Dhab ahaantii maaha mid aan muhiim u ahayn dulin-yaryaradan yar kuwaas oo dhiiga la jilciyay. Sidaa daraadeed, bisad, eey, iyo nin ayaa ku xanuunsan kara qaniinyada qamriga. Qaniinyada xanuunka, cuncunka iyo xasaasiyadda ayaa ah qayb yar oo ka mid ah dhibaatada ah in aragti la'aanta ah ee aan horay loo arag ay keeni karto.
Nadiifi gurigaaga! Tallaabooyinka Xakamaynta Digaaga
Boodhadhka digaaga waa cayayaanka waxyeellada leh ee rimaya shimbiraha. Shimbir kasta oo ka soo jeeda caanaha waawayn ilaa canjeerada yaryar iyo xayawaanka qallafsan ayaa ku xanuunsan kara. Ka fakar boodhadhka digaagga "hoosta mikroskoob"! Sawirka Digaagta digaaga ayaa leh midab aad u sarreeya, midab jajabiyay oo midab madow ah iyo dabacsan oo daboolan.
Oo sidee bay u tarayaan? Waa maxay ukumaha iyo dirxiga ee boodada
Kicinta cayayaanka ayaa keena dhibaatooyin badan. Waxayna ku xiran yahiin oo kaliya dareenka dareenka. Dheecaanku waxay u dulqaadanayaan cudurrada halista ah - cudurka boogaha, xanaaqa xanuunka, caabuqa infekshanka. Gaar ahaan marka aad tixgelisid in duleelkii hore ee ku noolaa eey, bisad ama jiir ay qaniini karaan qof. Macluumaadka ku saabsan sida cayayaanka loo dhufto, ayaa ka caawin doona inay la dagaallamaan.
Ma waxay horeyba sariirtaada ku hayaan? Sariir iyo sariirta dharka leh: qaababka loolanka, iyo sidoo kale sawirrada dhiig bixiyaha iyo qaniintooda
Ereyga "boodada sariirta" lama garanayo sayniska. Waxay u muuqataa sawir wadajir ah oo ay ku jiraan noocyo kala duwan oo ka mid ah qoysaska boodada ah ee ku nool guryaha dhismooyinka. Kuwani waa: eyga, bisadaha, jiirka, dhulka iyo kuwa kale. Sariirta sariirta ayaa ku leh magaca qofka. Tani ma'aha in qof kasta oo naga mid ah aanu ku hawlanayno si sax ah u go'aamin nooca iyo nooca boodada iyada oo la adeegsanayo mikroskoobo, in laga helo gurigeenna.
"Ku dheji" on dulin! Flea waxay u dhacdaa eeyaha dushooda
Xitaa eyga guriga leh wuxuu heli karaa boodada. Inta badan waxay ku jiraan xayawaan caafimaad leh inta lagu jiro socod. Cayayaanka ayaa loo yaqaanaa awoodda boodada. Dareemida ilaha cuntada, waxay ku dhaqmaan oo waxay boodaan xayawaanka xayawaanka. Boodhuhu aad ayuu u yaryahay si aad si dhakhso ah ugu aragto jaakadda xayawaanka.
Ilaalinta wanaagsan ee xayawaankaaga! Dib u eegista boodada iyo qoryaha faraha ee eeyaha
Murugada xayawaanka guryaha - dulin-dhiig-ku-nuugista - waqti ka waqti, dareen ahaan iyo dareenka muuqaalka, waxay ku sumoobaan nolosha labada eeyaha iyo milkiilayaashooda. Khatarta ma aha oo kaliya xaqiiqda ah in ay ku nool yihiin timo-eyda, waxay sidoo kale qabaan cudurro kala duwan. Haddii uu jiro ilmo yar oo guriga ah, dagaalka ka soo horjeeda boodada, shilinta iyo cayayaanka kale ayaa noqda xaalad caafimaad ee qoyska oo idil.
Miyuu saaxiibkaa bikrada ah uu yahay sidii hore oo kale? Xumaado ku jirta xiniinyaha: ogaanshaha iyo daaweynta
Muuqaalka kalluunka ee xuubka gudaha ayaa ah dhacdo naadir ah laakiin caadi ah. Taasina waa sababta milkiilayaasha shimbiraha loo jecel yahay inay ogaadaan waxa la samaynayo haddii ay dhacdo in lagu guul daraysto xayawaanka rabaayada ah ee aan la shaacin. Tixgeli si faahfaahsan dhibaatada ka jirta boodada xakamaynta. Waa maxay nooca boodada ah ee xayawaanka ku jira? Calaamadaha caabuqa ee xayawaanka cagaarka ah Inta badan inta badan xeryaha gudaha (ee noocyada kala duwan) waxaa soo weerara noocyada soo socda ee boodada: Digaag (shimbir); boodada; qaxwaha.
Socoshada socodka ha ilaawin inaad qalabeysid iyo eeyga! Calaacalaha iyo xargaha shimbiraha eeyaha
Milkiilaha daryeel kasta mar walba wuxuu ka baqaa caafimaadkiisa xayawaankiisa wuxuuna raadiyaa dhamaantiiskiisa si uu uga badbaadiyo cudurka iyo raaxo la'aan. Raaxo noocan oo kale ah ayaa la abuuray, oo ay ku jiraan, dulin-dhiig-nuugista: shilinta iyo boodada. Qolada gaarka ah ee "Kiltiks" waxaa loo tixgeliyaa inay tahay hubaal ah in laga takhaluso muddo dheer.
Caawi saaxiibkaa ugu fiican! Leopard ka soo horjeeda boodada eeyaha
Dhammaan curiyeyaasha eygu waxay ka walwalsan yihiin sida si dhakhso leh oo ammaan ah u ilaalin xayawaankaaga xayawaanka iyo boodada. Mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha suuqa cayayaanka ee cayayaanka ayaa ah shirkad fadhigeedu yahay Moscow, Agrovetzashchita, kaas oo soo saara badeecooyinka Bar-yada. Oo sidaas daraaddeed waxaan si faahfaahin ah u falanqeyn doonaa khariidadda badeecadaha ee ka soo jeeda eeyaha eeyaha. Macmacaanka Baraha Sida daroogada noocaan oo kale ah ayaa la soo saaraa: buufin, dhibco, shaambo, qarxan.